प्रधानमन्त्रीको दावी जस्तै अयोध्या चितवनमै छ त ? प्रमाण जुटाउँदै माडी नगरपालिका – Nepal Japan
प्रधानमन्त्रीको दावी जस्तै अयोध्या चितवनमै छ त ? प्रमाण जुटाउँदै माडी नगरपालिका
नेपाल जापान ३ श्रावण १७:०१
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भगवान राम नेपालकै अयोध्यामा जन्मेको बताउनु भएपछि यहाँको माडी नगरपालिकाले अयोध्याको प्रमाण जुटाउन लागेको छ । माडीको अयोध्यापुरीलगायतका ठाउँमा रामायणमा वर्णन गरिएका केही तथ्य भएपछि अयोध्या प्रमाणित हुने गरी नगरपालिकाले खोजी शुरु गरेको हो ।
नगर प्रमुख ठाकुर ढकालले धर्मशास्त्रमा व्याख्या भएअनुसार प्रमाण जुटाउन इतिहासविद्, भूगोलविद्, पुरातत्वविद्को खोजी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “पुरातत्व विभागलाई अध्ययन गर्न आग्रह गरिएको छ ।” माडीका धार्मिक गुरुहरूको भेला गरी इतिहास र तथ्यका विषयमा छलफल गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
धार्मिक गुरुहरूलाई उद्धृत गर्दै ढकालले रामायणमा उल्लेखित अधिकांश तथ्य र प्रमाण यहाँ रहेका बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “अयोध्यापुरी, सोमेश्वरगढी, पाण्डवनगर, पर्शुराम कुण्ड, सीताराम कुण्ड, वाल्मीकि आश्रम माडीका प्रमुख धार्मिक स्थल हुन्, यी रामायणसँग जोडिएका छन् ।” यी धार्मिक स्थलमा पुराना भग्नावशेष रहेका उल्लेख गर्दै उहाँले यहाँ पुराना इँटाका टुक्रा, तामाका पैसा, माटाका भाडा बनाएका टुक्र, इनार रहेको बताउनुभयो ।
यी सबै तथ्यका आधारमा अयोध्या माडीमा नै हो भन्ने विषयमा आफूहरू विश्वस्त रहेको प्रमुख ढकालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “हामी विश्वस्त छौँ, तर प्रमाणहरू जुटाउनेतर्फ लागेका छौँ ।” आफूहरूले अयोध्या प्रमाणित हुने तथ्य खोजेरै छाड्ने उहाँले जिकिर गर्नुभयो । उहाँले तीनै तहका राज्यको सहयोगमा पुरातात्विक वस्तुको उत्खनन् र प्रमाण जुटाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार माडीमा मानव बस्ती बसाउने शुरुआती चरणमा घर बनाउँदा, जग्गा सम्याउँदा पुराना सिक्का, मूर्ति भेटिने गरेका थिए । अहिले पनि कतिपय ठाउँमा खन्दा त्यस्ता पुरातात्विक वस्तु फेलापर्ने गरेका उहाँले बताउनुभयो । विष्टले भन्नुभयो “कतिपय प्रमाणहरू भेटिएका भए पनि व्यक्तिको घरघरमा रहेका छन्, तिनको संरक्षण र अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।” अब ती वस्तुहरूको सङ्कलन, संरक्षण र परीक्षण गरिने विष्टले बताउनुभयो ।
माडी वडा नं. ९ को सीमाना नजिक रामसीता नामका गुफा छन् । वडा नं. ८ मा बैकुण्ठ तालसँगै एक घण्टा पैदल हिँडेपछि धनलक्ष्मी छहरा पुगिन्छ । यी सबै संरचना राम सीतासँग जोडिने स्थानीय बताउँछन् । माडीकै वडा नंं. १ मा अवस्थित वाल्मीकि आश्रम पनि राम सीतासँग जोडिन्छ । रामले सीतालाई सो आश्रममा छाडेको र लव कुशको जन्म तथा शिक्षा लिएको ठाउँको रूपमा वाल्मीकि आश्रमलाई लिइन्छ । यो आश्रम अयोध्यापुरीबाट करिब ५० किलोमिटर पश्चिमतर्फ पर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको भनाइ पछि स्थानीयहरू उत्साहित भएका छन् । लकडाउनको समय भए पनि कतिपय धार्मिक गुरु र इतिहासका प्राध्यापक तथा विद्यार्थी अयोध्यापुरीको अवलोकन गर्न आउने गरेका छन् । नगर प्रमुख ढकालका अनुसार स्थानीयले माडी नगरपालिकाको नाम परिवर्तन गरी अयोध्या नगरपालिका राख्न अनुरोध गरेका छन् ।